Khabiirka Kala Duwan: Maxay SEO ku Khamaaraa Dadku Marka ay Qabtaan Websaytka E-Commerce
E-commerce SEO wuxuu noqon karaa dahab dahab gaar ahaan kuwa yaqaan sida loo sameeyosax. Waxaa jira dad badan oo halkaas jooga oo raba in ay ku baraan SEO, laakiin badanaa waxay ku dhamaataa macluumaadka marin habaabinta.
Khabiirka Sare Adeegyada Dijital ah Jason Adler ayaa sharraxaysa khaladaadka caanka ah ee caanka ah ee khaldaya dadka SEO ee ku shaqeeya ganacsiga e-ganacsiga.
1. SEO wax walba way hagaajin kartaa - bovegas promotions.
Dhab ahaantii, SEO waxay saameyn ku leedahay iibka, laakin wadiiqooyinka kale ee suuq-geynta ayaa ciyaarayadoor muhiim ah. Markay wadaan baabuurta iibka ah ee la socdo, waxaa jira waxyaabo badan oo loo baahan yahay in la tixgeliyo, ma aha oo kaliya liis gareyn website. SEOwaxay kor u qaadaa iibinta, laakiin dhalmada waa in ay noqoto tartan. Waxyaabaha kale ee tartanka ku jira waxaa ka mid ah bixinta alaabada,ganacsiga, isticmaalka, isticmaalka qiimaha, iyo wax badan oo kale. Fiirinta kaliya ee SEO farsamo ayaa si fudud kuu dhigi kara
2. Bogagga bogga maaha arrin
Goobaha qaybta ayaa ah mawduucyada lagu daro erayada muhiimka ah. Isticmaal qalabsida Semal Website Analizer, waxaad ka heli kartaa ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah, oo aad ku dari karto qaybahaaga. Had iyo jeer waa lagula talin karaawaxay sare u qaadaan magaca meta, H1 tag, sharaxaad meta, URL, iyo walxaha jidhkaaga (haddii ay jirto mid) ee WebCrawler si ay u muujiyaan kuwanqaybaha.
3. Qoraalka bogagga dibedda ah waa qalad
Inaad ka heshid mawduucyada la soo celiyo ee goobtaada waxay noqon kartaa go'aan fiican..Si kastaba ha ahaatee,waa inaad sidoo kale fiicnaataa inaad dib u hesho. Tusaale ahaan, Amazon waxay faa'iido weyn ka dhigtaa dib-u-isticmaalka sharaxaadaha goobahasi loo gaaro darajo sare. Waxay leeyihiin istiraatiijiyad dib u habayn ah
4. 'Hal cabbir ayaa ku haboon' raadiyaha udbeyneysa saadaalinta
Marna ha u dhicin baqshiistaha isticmaala bogagga qaybta qashinkadadka soo booqda. Dadku waxay internetka u isticmaalaan inta badan laba sababood. Midka koowaad waa baaritaan. Mid ayaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu barto suuqa amaururi macluumaad ku saabsan wax. Qofkani wuxuu u baahan yahay macluumaad kaliya mana baabuuri doono iibinta gaar ahaaneedtusaale ahaan. Sababta labaad waxay la xiriirtaa iibsashada. Qof ayaa laga yaabaa inuu diyaar u yahay inuu soo iibsado alaab. Booqashadan waa inay ahaataawaxaa lagu hagaajinayaa badeecooyinka iyo boggaga category ee ku habboon iibka. Bait iyo farsamaynta farsamada waxay keeni kartaa in la waayo iibsadaha rabasababtoo ah jihooyinka lagu guul daraystay
5. Faallooyinka ma caawiyaan SEO
Fikradaha waa dariiqa lagu daro sare ee matoorada raadinta. Intaas waxaa dheer,Dib u eegista waxay kordhisaa kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisha boggaaga. Qaar badan oo iibsadayaashu waxay u muuqdaan inay akhriyaan dib u eegis ka hor intaysan iibsan. AIstaraatijiyad dib u eegis wanaagsan, oo lagu soo bandhigay Google, ayaa hubaal ka dhigaya dadaalkaaga SEO. Dib u eegista waxay sidoo kale kordhineysaa wakhtiga ka qaybgalka aisticmaalaha boggaaga. Amazon waa mid fiican in la helo dib u eegis sheyga, taas oo ka dhigaysa inay iibsadaan aad u badan.
E-ganacsi waa goob farsamo oo ay dad badani fatahaadeenkhaldan la'aanta. Dadku waxay u muuqdaan inay ku tiirsan yihiin siyaabaha suuq-geynta internetka sida SEO laakiin ay ku fashilmeen inay ka mahadceliyaan suuq-geynta kale ee dijital ahfarsamooyinka shaqada. Sawir qaadashada talooyinka kor ku xusan, waxaad sameyn kartaa farqi u dhexeeya xaqiiqda si ay ula socoto ama ay khalad tahayiska dhaga tiri. Ka dib, bartilmaameedka guud ee ololaha suuq-geynta internetka ayaa badanaa sii kordhaya hogaanka iyo ugu dambeyntii beddelaad